Dr. Tint Swe ဒေါက်တာတင့်ဆွေ | Medical Writings ဆေးပညာစာများ
Dr. Tint Swe ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Pills Q and A (2) တားဆေး အမေး-အဖြေ (၂)
September 11, 2014 Uncategorizeddrswe01
၁။ ကျွန်မက Marvelon 28 သောက်တာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ အခုကလေးလိုချင်လို့ ဆေးဖြတ်ထားတာ တစ်ပတ်ရှိပါပြီ။ ကိုယ်ဝန် ချက်ချင်းရနိုင်ချေ ရှိပါသလားသိချင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကပြောတော့ တစ်နှစ်လောက်ဆေးဖြတ်ထားတာတောင် မရသေးတဲ့လူတွေ ရှိတယ်ပြောလို့ပါ။
ဟုတ်ပါမယ်။ တယောက်နဲ့တယောက်တော့ မတူကြဘူး။ ရာသီလ မှန်အောင်စောင့်သင့်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ Folic acid သောက်သင့်တယ်။
၂။ တစ်ချို့ကပြောတော့ တားဆေးဖြတ်ပြီးပြီးချင်း ကလေးမယူသင့်ဘူး တစ်လ နှစ်လလောက် စောင့်သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မကသောက်လက်စ ဆေးကဒ်ကို ကုန်အောင်သောက်ပြီး နောက်တစ်ကဒ် ဆက်မသောက်တော့ဘဲ ရပ်လိုက်တာပါ။ အခုလို ဆေးဖြတ်ပြီးပြီးချင်းမှာ ကလေးရခဲ့ရင် ကလေးမှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်လား သိချင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကလေးမယူသင့်ဘူးဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလားရှင်။
ဆေးသုံးတဲ့တားနည်းကိုရပ်ပြီး ရာသီမှန်အောင်စောင့်သင့်တယ်ဆိုတာ စောင်ကိုစောင့်ရမယ်လို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ရက်တွက်တာ သေခြာမယ်။ ဆေးထဲက ဟော်မုန်းတွေ ကုန်စင်စေမယ်။ ဟော်မုန်း နည်းနည်းပါးပါးက နောက်ကိုယ်ဝန်ကို စိုးရိမ်လောက်အောင် မထိခိုက်စေပါ။ ဟော်မုန်းတွေကလဲ မ-မျိုးဥထွက်လာမှာကိုသာ တားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို မပျက်စေနိုင်ပါ။ တနေ့ ၁ လုံးသာ သောက်ရမဲ့ဆေးကို ပိုမသောက်ရင် ပြောတာပါ။ များသောအားဖြင့်လဲ ချက်ချင်း နောက်ကိုယ်ဝန်ရတာက ရှားပါတယ်။ IUCD/IUD/Copper T ထည့်တာမျိုးကတော့ ဟော်မုန်း မပါဘူး။ (ကွန်ဒွမ်) မှာလဲ မပါဘူး။
၃။ Complete abortion နဲ့ Incomplete abortion ကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်ပါသလဲရှင့်။ သမီးကရော ဘယ် Abortionထဲမှာ ပါပါသလဲရှင့်။ တကယ်လို့ Incomplete Abortionဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဘာဆေးတွေသောက်သင့်ပါသလဲရှင့်။
Complete abortion ကိုယ်ဝန် အကုန်ပျက်ခြင်း ဆိုရင် ဆင်းစရာမှန်သမျှ အကုန်ဆင်းလို့ သွေးထပ်မဆင်းတော့ဘူး။ ခါးကိုက်-ဗိုက်နာလဲ မဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ်ဝန်နုရင် ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ Incomplete abortion တဝက်တပျက်ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း ဆိုရင် သွေးဆင်းနေတာက မရပ်ဘူး။ ဆင်းချင်လာရင် ဗိုက်နာမယ်။ ဆရာဝန်က စမ်းရင် သားအိမ်က ပုံမှန်ထက် ကြီးနေအုံးမယ်။ သားအိမ်ဝလဲ တဝက်တပျက် ပွင့်နေမယ်။ သားအိမ်ခြစ်ရမယ်။ တချို့ကတော့ ဆေးသုံးပြီး ကုန်အောင်လုပ်မယ်။ ဆင်းစရာမကုန်တာကနေ ကံမကောင်းလို့ ပိုးဝင်တတ်တယ်။
၄။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က သမီးအမျိုးသားနဲ့ အကာအကွယ် မပါဘဲ အတူနေခဲ့မိပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်ထပ်ရနိုင်ပါသလား။ ရခဲ့ရင်ရော အရင်လို ပျက်နိုင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန် ဘယ်နှစ်ပတ်က စပြီး ဆီးစစ်နိုင်ပါသလဲ။ ပျက်မကျအောင် ဘယ်လို နေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲရှင့်။
Abortion မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၈) ကို တင်လိုက်ပါတယ်။
Pregnancy and Good diet အစားအစာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရခြင်း ကိုလဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ကိုယ်ဝန် (၁)လ ကျော်ကျော်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးရင်း သွေးတွေအများကြီး ဆင်းလာပါတယ် ညနေရောက်တော့သွေးခဲလေးတွေ ဆင်းလာပါတယ် မနက်ရောက်တော့ ဆီးစစ်တံနဲ့စစ်ကြည့်တော့ မျည်းနှစ်ကျောင်းပေါ်နေပါတယ်။ အခုထိသွေးနည်းနည်းဆင်းနေ တုန်းပါပဲ။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သေးလားဆရာ။
မေးတာကို သိပ်မရှင်းပါ။ ကိုယ်ဝန်တလကျော်လို့ ရေးထားတယ်။ ဆီးစစ်တော့ အပေါင်းပြနေတယ်လို့ပါ သက်သေထူးထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သေးလားဆိုတာက ကိုယ်ဝန် ရှိခဲ့ပြီး ပျက်သွားတာက မကုန်သေးတာ၊ ဆက်ရှိနေသေးတာကို မေးတာထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်စရှိကတည်းကနေ ဆီး-သွေးစစ်ရင် အပေါင်းပြနေမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆက်တည်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပျက်သွားလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြနေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျက်သွားရင်တော့ ကြာကြာအဲလို အပေါင်းမပြနိုင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိစမှာ သွေးဆင်းတာက ကိုယ်ဝန်ပျက်တာအပြင် တခြား အကြောင်းကြောင့်လဲ ဆင်းနိုင်တယ်။ ဒုတိယအမျိုးအစားဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆက်ရှိနိုင်တယ်။ ဆက်ရှိစေအာင် သတိထားရလိမ့်မယ်။
• Abortion Complications ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲများ
၆။ ဆက်ဆံတာ 1-1-2012 ကပါ။ ဆက်ဆံပြီးနောက်လည်း Pill 72 တားဆေးကို အချိန်မှန် နည်းလမ်းမှန် သောက်ပါတယ်။ 6-1-2012 ကြတော့ ရာသီလာပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်တော့ဘူးမလားဆရာ။ နောက်ပြီး နောက်လတွေဆိုရင် ရာသီလာရက်အတိုင်း ပြန်မှန်စွာလာပါသလား။ အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ ပုံမှန်ရာသီ လာနေကျရက်ကတော့ 22-1-2012 ပါ။ အဲဒီ Pill72 ဆေးကိုသောက်လို့ စောလာတာလား။ အဲလိုကော ရာသီစောလာနိုင်ပါသလား။ အဲလို ဆေးသောက်ပြီး ၇ ရက်အတွင်း ရာသီလာတော့ လန့်သွားကြတယ်။ အဲဒီဆေးက အဲလိုလာပါသလားဆရာ။
– ရာသီလာတယ်ဆိုရင် ဒိအရင်က ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဘဲ အတူနေနေ အဲဒီလိုနေခဲ့တာတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်မရပါ။
– ရာသီတခါလာပြီးနောက် ဆက်ဆံတာမရှိရင်၊ ဆက်ဆံရင်လဲ ရက်ရွေးမှန်ရင်၊ ဘယ်ရက်မှာဖြစ်ဖြစ် အကာအကွယ်ကို စနစ်တကျသုံးပြီး ဆက်ဆံရင်လဲ ကိုယ်ဝန်မရစေပါ။
– အဲလိုနေခဲ့ရင် နောက်လမှာလဲ ရာသီပုံမှန်လာပါမယ်။
– တကယ်လို့ ဟော်မုန်းပါ တားဆေး (စားဆေး-ထိုးဆေး) သုံးတာဆိုရင် ရာသီရက် မတူတာမျိုး တချို့ မိန်းကလေးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
– စိတ်-ရုပ် ဖိအားကြောင့်လဲ ရာသီရင် အပြောင်းအလွဲရှိနိုင်တယ်။
– အရေးပေါ်တာဆေးကနေ ရာသီရက် ပြောင်းစေတယ်။
– အရေးပေါ်တာဆေးကို ပုံမှန်တားဆေးသဘော အမြဲသုံးတာ မသင့်ပါ။
Birth Control pills 25 FAQs ကိုယ်ဝန်တား စားဆေး အမေး-အဖြေ ၂၅ ခု
ဆရာ တားဆေးတွေဟာ ဘယ်အချိန်အတွင်းသုံးစွဲရပါသလဲ။ ပြီးတော့ တားဆေးတွေရဲ့ဆိုးကျိူးတွေအကြာင်း ဆရာ့ website မှာ ဖတ်လို့မရပါ။ ဖတ်လို့ရမဲ့ link ရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ပို့ပေးပါဆရာ။
၁။ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။
• ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ လုပ်ထားတဲ့ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတင်) ဟော်မုန်း (အတု) တွေ ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေ သွေးထဲ ဝင်လာရင် ကိုယ်ဝန်မရစေဘူး။ လစဉ်ထွက်နေကျ မ-မျိုးဥထွက်လာမှာကို တားဆီးပေးမယ်။ သားအိမ်ဝမှာ ရှိနေတဲ့ အကျိအချွဲကို စေးပျစ်စေလို့ သုက်ပိုးဝင်လာမှာကို တားပေးတယ်။ ဖို-မ နှစ်ခု မတွေ့စေနိုင်ဘူး။ သားအိမ်အတွင်း နံရံကို ပါးလွှာစေလို့ ဖို-မ တွေ့ကြအုံးတော့ လာမတွယ်စေနိုင်ဘူး။
၂။ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးသောက်နေရင် တခြားတားနည်း လိုသေးသလား။
• ဒီ တားဆေးတွေ၊ Implant အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ တားဆေးချောင်းနဲ့ Depo-Provera ၃ လခံ ထိုးဆေးတွေဟာ ရာသီစလာတဲ့နေ့ကနေ စသုံးရင် ချက်ချင်း ထိရောက်တယ်။ အမှန်က ၇ ရက်နေမှ အသေအခြာ ထိရောက်ပါတယ်။ အဲဒီ ၇ ရက်အတွင်း အတူနေပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရဘို့ % အတော်ကြီး များတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုလိုမယ်မယ် ဒီ ၇ ရက်အတွက် တခြားနည်းတခုခုသုံးရင် ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချရမယ်။
၃။ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးသောက်တာ ရပ်လိုက်တဲ့နောက် ဘယ်လောက်ကြာမှ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလဲ။
• တချို့မှာ စောင့်စရာမလိုပါ။ တချို့က ခဏစောင့်ရမယ်။ ရာသီလာတာ ပုံမှန်ဖြစ်လာအောင် ထိန်းညှိနေအုံးမယ်။ တချို့ တနှစ်လောက် စောင့်ရနိုင်တယ်။
၄။ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေး ရပ်လိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရသေးပါလား။
• ဆေးရပ်လိုက်ပေမဲ့ ဆေးသတ္တိကျန်နေသေးအုံးမယ်။ ပျမ်းမျှ ၂-၃ လ ကြာ စောင့်ရတတ်တယ်။
• Depo-Provera are ဆေးထိုးတားသူဆိုရင် ၆-၁၂ လ စောင့်ရတတ်တယ်။ ရာသီမလာတာလဲ ရှိနိုင်တယ်။
၅။ ကျမ ရာသီ ပြန်မလာပါလား။
• Progestin-only pills ဟော်မုန်း တမျိုးထဲပါဆေးမျိုး သောက်ရင် ရာသီမလာတာဖြစ်သူ များတတ်တယ်။ မသေခြာရင် ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ ဆီးစစ်ပါ။
• Depo-Provera ထိုးသူတွေ ရာသီမလာတတ်တာ များတယ်။ လူဝလာတတ်တယ်။ ရင်သားနာတတ်တယ်။ ခေါင်းနဲနဲ ကိုက်မယ်။
၆။ ဆေးသောက်ဘို့ မေ့သွားရင် ဘာလုပ်မလဲ။
• ဆေးကို ရက်သာမက အချိန်လဲတိကျနိုင်လေကောင်းလေဖြစ်တယ်။ နာရီပိုင်းနောက်ကျရင် မကာကွယ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဟော်မုန်း အတက်အကျဆိုတာ မှန်နေရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ မေ့ရင် သတိရတာနဲ့ သောက်ပါ။ တရက်မေ့ရင် မေ့ခဲ့တဲ့ဆေးပါ သောက်လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာက ၂ လုံးကို တရက်ထဲ သောက်ရမှာပါ။ ၂ ရက်အထိမေ့ရင် ၃ လုံး မသောက်ပါနဲ့။ လိုလိုမယ်မယ် နောက် ၇ ရက်တွက် တခြားကာကွယ်နည်းတခုခုပါ သုံးပါ။
၇။ ဆေးသောက်ပြီး အန်ရင် ထိရောက်မလား။
• ဆေးသောက်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း အန်ရင် ဆေးတလုံး ထပ်သောက်ရမယ်။
၈။ ကြားရက် သွေးဆင်းနေတယ်။
• ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေး စသောက်ဘူးသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာက ဆေးထိရောက်မှု နည်းတဲ့သဘော ဖြစ်တယ်။ အပိုနည်းပါ သုံးဘို့ လိုချင်လိုမယ်။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ Chlamydia ပိုးဝင်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၉။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေမှန်း မသိဘဲ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးသောက်မိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
• ဒီဆေးတွေကနေ ကိုယ်ဝန် နဲ့ အထဲကကလေးကို ဘယ်လို သက်ရောက်တယ်ဆိုတာ ပြည့်စုံတဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါ။ သိတာနဲ့ ဆေးသောက်တာ ရပ်လိုက်ပါ။
၁ဝ။ ဘယ်လို အမျိုးသမီးတွေ ဒီဆေးမျိုး မသောက်သင့်သလဲ။
• ကလေးနို့တိုက်နေသူ။ ဒါမှမဟုတ် ကလေး ၆ လထက်ငယ်ပြီး နို့တိုက်နေသူ။
• ဘာလို့မှန်း မသိဘဲ သွေးဆင်းနေသူ။
• အသဲရောဂါ လောလောလတ်လတ် ရှိနေသူ။
• အသက် ၃၅ နှစ် ကျော်လာသူ။
• နှလုံး (စထုပ်ခ်) ဖြစ်ဘူးသူ။
• (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါရှိသူ။
၁၁။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ။
• စိုးရိမ်စိတ်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်၊
• သွေးကြောထဲ သွေးခဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။
• သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်၊
• သည်းခြေကျောက်။ (ရှားပါး)၊
• နှလုံး (အတက်ခ်) ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဝက်ခြံ တိုးနိုင်-လျှော့နိုင်တယ်။
• မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်မွှေ များ-နည်း၊
• အသားဝါ၊ (ရှားပါး)၊
• အလဲ အကျိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ရှားပါး)၊
• လိင်စိတ် နည်းနိုင်တယ်။
• သားအိမ်ဝ ကင်ဆာ၊
• အရေပြား အနီပြင်ထွက်၊ အမဲကွက်ထွက်၊
• (စထုပ်ခ်) ဖြစ်နိုင်တယ်။
၁၂။ လူဘယ်လောက် ပိုဝတတ်သလဲ။
• တယောက်နဲ့တယောက်တော့ မတူဘူး။ စားချင်စိတ်ပိုလာလို့ နဲ့ အဆီပိုစုလာလို့ ဝလာတာဖြစ်တယ်။ Depo-Provera ဆေးထိုးသူတွေ ပဌမနှစ်ကုန်မှာ 5.4 ပေါင်တိုးပြီး ဒုတိယနှစ်ကုန်မှာ 8.1 ပေါင်တိုးတယ်။ အဲလိုလူတွေ ၂ နှစ်ထက်ပို မထိုးသင့်ပါ။
၁၃။ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးကို ၁ဝ နှစ်ကြာသောက်ရင် အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဘယ်နှစ်နှစ်အထိ သောက်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် ရှိသလား။
• မဟုတ်ပါ။ မရှိပါ။
၁၄။ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်သလဲ။
• ရာသီဆင်းနည်းမယ်။ ရာသီလာတုံး ဗိုက်နာတာ သက်သာမယ်။
• တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်တာ နည်းတယ်။
• သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ နည်းတယ်။
• ရင်သား အကျိတ်ဖြစ်တာနည်းတယ်။
• မ-မျိုးဥအိမ် အကျိတ်ဖြစ်တာ နည်းတယ်။
• သားအိမ်-ကင်ဆာ နဲ့ မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာ ဖြစ်တာ နည်းတယ်။
• သွေးအားနည်းတာ နည်းမယ်။
• ဝက်ခြံဖြစ်တာ နည်းမယ်။
• ရာသီမလာခင် ဖြစ်တတ်တာတွေ အဖြစ်နည်းမယ်။
• Osteoporosis အရိုးရောဂါဖြစ်တာ နည်းမယ်။
• ကိုယ်မွှေးပေါက်တာ နည်းမယ်။
• ဗဂျိုင်းနား ခြောက်တာ နည်းမယ်။
၁၅။ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ မတည့်ဘူးဆိုတာ မှန်သလား။
• တီဘီ အတွက်ပေးတဲ့ Rifampin ဆေး တမျိုးထဲကနေသာ ဆေးအာနိသင်နည်းစေတတ်တယ်။ တခြား ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ တွဲသောက်လို့ ထူးခြားတာ မရှိပါ။
၁၆။ တခြားဘယ်ဆေးတွေနဲ့ တွဲသောက်တာ ထိရောက်မှု နည်းစေနိုင်သလဲ။
• HIV protease inhibitors ဆေးအလိ်ု့၊
• Griseofulvin ပွေးပျောက်ဆေး၊
၁၇။ ဘယ်ဆေးတွေနဲ့တွဲသောက်ရင် ဆေးအာနိသင်ကို လျှော့နည်းစေသလဲ။
• အနာ-အကိုက်သက်သာဆေး Acetaminophen (Tylenol, Parcetamol)
• သွေးကျဆေး၊ Cyclopenthiazide (Prothiazide)
၁၈။ ဘယ်ဆေးတွေနဲ့တွဲသောက်ရင် ဆေးအာနိသင်ကို ပိုများစေနိုင်သလဲ။
• စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဆေး၊ Imipramine
• ပန်းနာဆေး၊ Theophyline
• စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ Benzodiazepam (Valium, Ativan, Librium, Serax, Tranxene, Xanax)
၁၉။ Birth control patch ကိုယ်ဝန်တား ကပ်ခွါဆေးက အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
• မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး Ortho Evra လို ကိုယ်ဝန်တား ကပ်ခွါဆေး သုံးနေကြတယ်။ ၂ဝဝ၂ ကတည်းကစခဲ့ပြီး အတိအကျသုံးတတ်ရင် ၉၉့၇% ထိရောက်တယ်။
၂ဝ။ Low-dose birth control pills ဟော်မုန်း လျှော့ထည့်တဲ့ဆေးမျိုးက ထိရောက်ပါသလား။
• စိတ်ချရပါတယ်။ ထိရောက်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး သက်သာစေအာင် တီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်။
၂၁။ ကိုယ်ဝန်တား ကပ်ခွါးဆေးက လူကောင်ကြီး-ငယ်သူတွေကို ဘယ်လိုထူးခြားစေသလဲ။
• လူအရွယ်အစား မရွေး အတူတူ အသုံးကျ ထိရောက်ပါတယ်။ ပေါင် ၁၉၈ ပေါင်ထက် များသူတွေမှာ ထိရောက်မှု နည်းတာ တွေ့လာရတယ်။ Low-dose oral contraceptives ဆေးအဆလျှော့ထားတဲ့ စားဆေးလဲ ဒီသဘောအတိုင်း ဖြစ်တယ်။ အဲလို လူကောင် သိပ်ကြီးမားသူတွေအတွက် IUCD နည်း သုံးသင့်တယ်။
၂။ Norplant အသစ်ပေါ်နေပြီဆို။
• Six rods Norplant system (Implanon) ကိုယ်ဝန်တား ဆေးချောင်း အရေပြားအောက်မှာထည့်နည်း ပေါ်တာ ကြာပါပြီ။ ၆ ချောင်းထည့်တယ်။ အခု Single-rod implant တချောင်းထဲနည်းပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ၃ နှစ်အထိထားလို့ရတယ်။
၂၃။ လိင်စိတ်နည်းစေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
• ဆေးမှန်သမျှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတာချည်းပါဘဲ။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို လေ့လာနေကြတာ အနှစ် ၄ဝ ကျော်ရှိသွားပါပြီ။ လိင်စိတ်အပေါ် သက်ရောက်မှုကိုလဲ လေ့လာပါတယ်။ လတ်တလော ဆန်းစစ်မှုအရ စားဆေး၊ ကပ်ခွါဆေး၊ ဆေးကွင်း၊ ထိုးဆေးတွေ အားလုံးကနေ အများစုသော အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်စိတ် မနည်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျန်အမျိုးသမီး ကြီးငယ်တွေမှာ တချို့ လိင်စိတ် နည်းကြတယ်။ တချို့မှာ များကြတယ်။ ဘာလို့ ဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတာ မရှင်းပါ။
၂၄။ ရာသီ တောက်လျှောက် မဆင်းအောင် တားဆေးနဲ့ လုပ်လို့ရသလား။
• မှန်မှန်သောက်တဲ့သူဆိုရင် ရတယ်။ Depo-Provera, IUCD, Vaginal ring တွေကလဲ ရာသီနည်းစေတယ်။ အမေရိကန်သူတွေ ၄၄% ရာသီမဆင်းအောင်နေကြတယ်။ (ဟန်းနီးမွန်း) ထွက်တာ၊ အာကစားပြိုင်ပွဲဝင်တာ၊ အလုပ်မရှုတ်ချင်လို့၊ ရာသီမလာခင် ဖြစ်တတ်တာတွေ မဖြစ်အောင်လို့၊ စတဲ့ ဆန္ဒတွေကြောင့် တမင်လုပ်ကြတယ်။
၂၅။ Latex condoms အများသုံး (လေးတက်စ်) နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ (ကွန်ဒွမ်) နဲ့ မတည့်ရင် ဘယ်ဟာသုံးမလဲ။
• ၂ နည်းရှိတယ်။ (၁) Female condoms အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်) က Polyurethane နဲ့လုပ်ထားတယ်။ အသေအခြာ သုံးတတ်ရင် ၉၅% ကာကွယ်နိုင်တယ်။ FC Female Condom ခေါ်တယ်။ (၂) Polyurethane male condoms ယောက်ျား (ကွန်ဒွမ်) ကို သုံးနိုင်တယ်။ Avanti နဲ့ Trojan Supra ခေါ်တယ်။
Pregnancy and Expected due date (EDD) ကလေး ဘယ်တော့မွေးမလဲ
1. ဆရာရှင့် ကျွန်မ၏ကိုယ်ဝန် due date 11.9.14 ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဗိုက်လဲမနာပါ။ မွေးလဲမမွေးသေးပါ။ နောက်တပတ်ထပ်ချိန်းပါသည်။ မိခင်၏ဗိုက်ထဲတွင် ကြာနေသောကလေးတွင် အသားဝါရောဂါ ပါလာတတ်ပါသလားရှင့်။ နောက်ထပ် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲရှင့်။ စိတ်ပူလို့ပါ။ နောက်တပတ်ထိ ဗိုက်မနာလျင်ရော မည်သသို့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။ ကျေးဇူြးုပု၍ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။
2. ကိုယ်ဝန်ဆောင် အများစုမှာပေါ့နော် မိန်းခလေးဆိုရင် ၁ ပတ် စောမွေးတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ဥပမာ ၃၉ ပတ် မှာပေါ့။ ယောက်ျားလေးဆို နောက်ကျ မွေးတက်တယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်လဲဟင် –
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း EDD ဂျူးဒိတ်ထက် ၁-၂- ပါတ်စော၊ ၁-၂ ပါတ်နောက်ကျနိုင်တယ်။ ကလေးလှုပ်နေရင် စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။ အပြုသဘောဆောင်ပါ။ ကလေးတိုင်း ၃ ရက်ကနေ ၁၅ ရက်အထိ အသားဝါတယ်။ ဗိုက်နာ၊ အရည်ဆင်း၊ သွေးဆင်း တခုခုဖြစ်တာနဲ့ မွေးမဲ့နေရာကိုသွားပါ။
• Expected due date (EDD) ခန့်မှန်းမွေးမဲ့ရက် သိချင်ရင် နောက်ဆုံး ရာသီလာခဲ့တဲ့ လထဲက ပဌမဆုံး သွေးဆင်းခဲ့တဲ့ Last menstrual period (LMP) ရက်ထဲကို ၉ လ နဲ့ ၇ ရက် ပေါင်းထည့်ရတယ်။
• ခန့်မှန်းရက်သာ ဖြစ်တယ်။ ရှေ့ ၂ ပါတ် စောမွေးနိုင်တယ်။ ၂ ပါတ်လဲ နောက်ကျနိုင်တယ်။
• Ultrasound ရိုက်ရင်လဲ တခါရိုက်ရင် တခါ သန္ဓေရဲ့ အနု-အရင့်ကို မှန်းပေးမယ်။ ဘယ်နှစ်ပါတ် နဲ့ ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလို့ ရေးကြတာ များတယ်။
• ဘယ်လို လုပ်သလဲဆိုတော့ ကလေးရဲ့ ခေါင်းဘေးတိုက်၊ ဗိုက်အဝန်း နဲ့ ပေါင်ရိုးအရှည်တွေကို တိုင်းပြီး ကွန်ပြူတာပါ အညွှန်းကိန်းတွေအရ ပျမ်းမျှ တွက်ချက်ပေးတယ်။
• (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်တဲ့ နေ့စွဲထဲကနေ သန္ဓေဘယ်လောက် ရင့်နေပြီ ဆိုတာကို နုတ်လိုက်ရင် ကိုယ်ဝန် စရှိခဲ့တဲ့နေ့ (LMP) ကို သိနိုင်တယ်။ အဲဒီထဲကို ၉ လ နဲ့ ၇ ရက် ပေါင်းရင် ခန့်မှန်းမွေးမဲ့ရက် (EDD) သိလာတယ်။
• (အာလ်ထွာဆောင်း) (ရီပို့တ်) ရေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေက ရက်-လ-နှစ်လို့ မရေးကြတာ ဂွကျတယ်။ Weeks ရက်သတ္တပါတ်နဲ့ Days ရက်ကိုဘဲ ရေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှတ်တမ်းမှာ ရက်သတ္တပါတ်ကိုသာ ယူတယ်။ Months လ ကိုမယူဘူး။
• နုတ်တဲ့အခါ သင်္ချာတော့ သုံးရတယ်။ ရက်-လ-ခုနှစ် ကိုက်အောင် ရက်သတ္တပါတ် နဲ့ ရက် ကို လဖွဲ့ယူရတယ်။
• တခြားနေရာမှာ ဘာသုံးသုံး မွေးလူနာကို သင်္ချာတွက်ရင် တလမှာ ၄ ပါတ်၊ တလမှာ ရက် ၃ဝ ထား တွက်ကြရတယ်။ ပြက္ခဒိန်ကို မကြည့်ပါနဲ့။
• ဘယ်နည်းနဲ့ တွက်တွက် ကွက်တိမွေးလာတာ နည်းတယ်။
• ယမုန်နာဆေးခန်းလေးမှာ မွေးပြီးသူ ၂ဝ၄ ယောက်ထဲမှာ Date of birth (DOB) အတိအကျ မွေးသူ စုစုပေါင်း ၅ ယောက်ပဲ ရှိတယ်။
Ultrasound in Pregnancy for determination of gestational age and assessment of fetal size ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ပြီး ကလေးအသက်နဲ့ အရွယ်အစား ခန့်မှန်းခြင်း
(၁) Crown-rump length (CRL) ခေါင်းထိပ်ကနေ တင်ပါးစွန်းအထိအရှည်၊
ကိုယ်ဝန် ၇-၁၃ ပါတ်မှာစတိုင်းလို့ရတယ်။ တိကျတယ်။ နောက်တခါ ထပ်ရိုက်ပေမဲ့ ဒီကိန်ဂဏန်းက မပြောင်းရဘူး။
(၂) Biparietal diameter (BPD) ခေါင်းဘေးနှစ်ဘက်အကွာအဝေး၊
ကိုယ်ဝန် ၁၃ ပါတ်နောက်ဆိုရင် တိုင်းလို့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ 2.4 cm ရှိနေရာကနေ မွေးခွနီးရင် 9.5 cm ရှိလာမယ်။ ကလေးခေါင်းအရွယ်အစား မတူတတ်တာများလို့ မွေးမဲ့ရက်တွက်ဘို့ရာ ဒီဂဏန်းကို သိပ်အားမကိုးထိုက်ဘူး။
(၃) Femur length (FL) ပေါင်ရိုးအရှည်၊
ကလေးတွေက အရပ်ရှည်မှာ မတူတတ်တာများလို့ မွေးမဲ့ရက်တွက်ဘို့ရာ ဒီဂဏန်းကို သိပ်အားမကိုးထိုက်ဘူး။ ၁၄ ပါတ်မှာ 1.5 cm ရှိရာကနေ မွေးကာနီးရင် 7.8 cm ရှိလာမယ်။
(၄) Abdominal circumference (AC) ဗိုက်အဝန်း၊
အရေးကြီးဆုံး ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်။ ကလေး အသက်ထက် အရွယ်အစားနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုသိသာတယ်။ မွေးမဲ့ရက်တွက်တာမှာတော့ သိပ်အားမကိုးရဘူး။
September 9, 2014 Uncategorizeddrswe01
Genital herpes လိင်လမ်း ရေယုံဆိုတာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်စေတဲ့ရောဂါတွေ အများကြီးထဲမှာ ပါတယ်။ ယောက်ျား-မိန်းမ လိင်အင်္ဂါတွေ အနီးအနား အရေပြားနဲ့ (မြူးကပ်စ်) အမြှေးပါးတွေမှာ လာဖြစ်တယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ၂ မျိုး ရှိတယ်။
1. Herpes simplex virus type2(HSV-2)
2. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
အမျိုးအစား (၂) က ပိုဖြစ်တယ်။ ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေက ထွက်တဲ့ အရည်တွေကနေ နောက်တယောက်ကို ကူးစက်တယ်။ (၁) ကတော့ ပါးစပ်နားတဝှိုက်မှာသာ ဖြစ်တယ်။ Cold sores လဲခေါ်တယ်။ Fever blisters လဲခေါ်တယ်။ ဆက်ဆံရာမှာ ပါးစပ် သုံးမိရာကနေ လိင်အင်္ဂါကို ကူးစေမယ်။ မျက်စိနဲ့ မြင်ရတဲ့ အနာသာမက မမြင်နိုင်တာကနေလဲ ကူးစေတယ်။ ပိုးရှိနေပေမဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ မပြသူတွေကနေလဲ ကူးလာနိုင်တယ်။ Genital HSV-2 ကူးစက်ရောဂါက အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုးများတာ တွေ့ရတယ်။ ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်း။ ယောက်ျားတွေမှာ ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်း။
• အနာဖြစ်တာပါဘဲ။ တခါတလေ မနာလို့ သတိတောင် မထားမိတတ်ဘူး။ ပုရွက်ဆိပ်ကိုက်သလို၊ ခြင်ကိုက်သလို ထင်တတ်တယ်။ တချို့ကြ ဆိုးလှတယ်။
• ပိုးဝင်ပြီး ၂ ပတ်နေရင် ဖြစ်တာက ဆိုးတယ်။ အနာသာမကဘဲ အစားအသောက်ပျက်တာ၊ ကိုယ်ပူတာ၊ မအီမသာဖြစ်တာ၊ ကိုက်ခဲတာတွေပါ ရှိနိုင်တယ်။
• အနာလေးတွေကလဲ မီးလောင်ဖုလေးတွေလိုနေမယ်။ နာမယ်၊ ကောက်ရိုးရောင်အရည် အောင်းနေမယ်။
• အမျိုးသမီးမှာ Vaginal lips (labia) မအင်္ဂါနုတ်ခမ်းသား၊ Vagina မွေးလမ်းကြောင်း၊ Cervix သားအိမ်အဝ၊ Anus စအိုအနား၊ Thighs ပေါင်နဲ့ Buttocks တင်ပါးနေရာတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ယောက်ျားတွေဆိုရင် Penis လိင်တံ၊ Scrotum ကပ်ပဲ့အိတ်၊ Anus စအိုးအနား၊ Thighs ပေါင်နဲ့ Buttocks တင်ပါးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် Tongue လျှာ၊ Mouth ပါးစပ်၊ Eyes မျက်စိ၊ Gums သွားဖုံး၊ Lips နှုတ်ခမ်း၊ Fingers လက်ချောင်းနဲ့ တခြားနေရာတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• အဖုလေးတွေ ပေါက်မထွက်ခင် ပူလောင်၊ နာကျင်၊ ယားယံတာခံစားရမယ်။ ပေါက်သွားရင်တော့ အနာ သေးသေးလေး ဖြစ်လာမယ်။ ၇-၁၄ ရက်နေမှ ပျောက်မယ်။
• ရှားတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ တက်စေ့ရောင်တာ၊ ဆီးအောင့်တာ၊ မွေးလမ်းက တခုခုဆင်းတာ။
• အစဖြစ်ပြီးနောက် ဆက်ဖြစ်တာက ရက်တိုတယ်။ ရက်တွေကြာမှ လာဖြစ်တယ်။ ကြားထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်က ပုန်းနေသလိုနေတယ်။
• ပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတာ လူနာက အားယုတ်နေချိန်၊ ရာသီပေါ်ချိန်၊ စိတ်-အလုပ်ရှုတ်ချိန်၊ ထိခိုက်မှုရှိချိန်မျိုးတွေမှာ လာဖြစ်တယ်။
• ပိုးကကိုယ်ထဲမှာ အမြဲရှိနေနိုင်သွားပြီ။ တချို့ဆို တနှစ်တခါဆိုသလို ပြန်ပေါ်နေတတ်တယ်။ ယောက်ျားဖြစ်တာ သက်သာတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေတာ သေခြာအောင် Culture လုပ်လို့ရတယ်။ ၂-၃ ရက်ကြာမယ်။ ပိုးစဝင်ချိန်ကာလမှာသာ တွေ့တတ်တယ်။
Blood tests သွေးစစ်တာလဲ လုပ်လို့ရတယ်။
(ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးကိုသေစေတဲ့ဆေး မရှိပါ။ Antiviral medication ဆေးနဲ့တော့ သက်သာစေနိုင်တယ်။ အပျောက်မြန်စေမယ်၊ ခံစားရတာတွေ နည်းစေမယ်။ Acyclovir, Famciclovir နဲ့ Valacyclovir ဆေးတွေကို သုံးပါတယ်။ ပြန်ဖြစ်တတ်သူဆိုရင် စဖြစ်တာ သိတာနဲ့ ချက်ချင်းဆေးသောက်ပါ။ နေ့တိုင်းနဲ့ ကြာကြာသောက်ရတတ်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုရင် စောစော ဆေးကုထားရင် ကောင်းတယ်။ ကလေးဖွါးချိန် စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ မွေးလမ်းမှာ ရေယုံပေါက်နေသူကို ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ကောင်းတယ်။ ကလေးကို ကူးစက်ရင် ဆိုးတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ Encephalitis ဦးနှောက်ရောင်၊ Chronic skin infection နာတာရှည် အရေပြားနာ၊ Severe developmental delays ဖွံ့ထွားမှု နှေးလွန်းတာ နဲ့ Death အသက်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Acyclovir (Zovirax) ဆေးက Capsules 200 mg, Tablets 400 and 800 mg, Suspension 200 mg/5 ml, Injection 50 mg/ml, Powder for injection 500 and 1000 mg နဲ့ Ointment 5% လာတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ လူကြီး 200-800 mg ကို ၄ နာရီတခါ သောက်ရတယ်။ သွေးကြောထဲ ထိုးရင် 5-10 mg/kg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်ထိုးရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေအတွက် သုတေသန လုပ်တာ မပြည့်စုံသေးပါ။
2. Famciclovir (Famvir) ဆေးက Tablets 125, 250, 500 mg လာတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်ပါ။ လူကြီး တခါသောက် 1,000 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ပြန်ဖြစ်သူဆိုရင် တနေ့ 1,500 mg တခါထဲသောက်ပါ။ နောက်ပြီး တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၁ နှစ်အထိ သောက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေ အတွက် သုတေသန မပြည့်စုံသေးပါ။
3. Valacyclovir (Valtrex) ဆေးက Caplets 500 mg လာတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ လူကြီး စဖြစ်စသိရင် တခါသောက် 1 gm တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက် သောက်ပါ။ အနာဖြစ်မှဆိုရင် 1 gm တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက် သောက်ပါ။ ပြန်ဖြစ်သူဆိုရင် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက် သောက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေ အတွက် သုတေသနလုပ်တာ မပြည့်စုံသေးပါ။
ဆေးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တခုနဲ့တခုဆင်းတယ်။ အားယုတ်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ပျို့ချင်-အန်ချင်မယ်၊ အနီပြင် ထွက်မယ်၊ ရှားရှားပါးပါး တက်မယ်၊ လက်တုံမယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးမယ်၊ သွေးအားနည်းမယ်၊ ကြွက်သားတွေ နာမယ်။
Home care အိမ်မှာတင်လုပ်သင့်တာတွေရှိတယ်။
• နိုင်လွန်စတဲ့ (ကော်တွန်) မဟုတ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ မဝတ်ပါနဲ့။
• ဆပ်ပြာသုံး ရေဆေးတာ လုပ်ပေးပါ။
• ရေနွေးနဲ့ချိုးရင် နာတာ သက်သာစေမယ်။
• ဗက်တီးရီးယားပို ထပ်ဝင်ရင် ပိုးသေဆေးသောက်ပါ။
• လိင်လမ်းမှာ လောလောလတ်လတ် ရေယုံရှိနေသူကို အဖေါ်မှာ HIV ရှိနေရင် ကူစက်ဘို့ ပိုများစေတယ်။
• လိင်ဆက်ဆံတာ ရှောင်ပါ။ ပါးစပ်သုံးနည်း အပါအဝင် ဖြစ်တယ်။
• သိပ်တိကျချင်ရင် ရေယုံမရှိတာ သေခြာသူနဲ့သာ ပေါင်းဖက်သင့်၊ အိမ်ထောင်ပြုသင့်တယ်။
• Condoms (ကွန်ဒွမ်) သုံးတာဟာ ရှိသမျှနည်းတွေထဲမှာ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တယ်။
• Vaccines ကာကွယ်ဆေးတွေက စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွေမှာသာ ရှိပါသေးတယ်။
• Herpes virus type 1 နဲ့2ကနေ ကူးစက်တယ်။ အမေရိကားက လူလတ်-လူကြီးတွေထဲမှာ ၂၂% Type2Herpes ဖြစ်နေကြရတယ်။
• ဗြိတိန်မှာလဲ လိင်နဲ့ဆိုင်တာ ကုသပေးရသူတွေထဲက ၂၃% မှာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီမှာဘဲ သွေးလှူသူတွေထဲက ၇့၆% မှာ တွေ့ရတယ်။ လိင်လမ်းနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ပါးစပ်ဘေးမှာ ဖြစ်တာကလဲ Type2Herpes ဖြစ်တယ်။
• ပြန်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လိင်လမ်းမှာ ရောဂါရှိနေသူကနေ မွေးစကလေးကို ကူးမယ်။ ကိုယ်ခံအား နည်းနေသူတွေမှာ ထပ်ပိုး ဗက်တီးရီးယား ဝင်တာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ HIV ဝင်လာနိုင်တယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၂၅% ကနေ Aseptic meningitis ဦးနှောက်မြှေး ရောင်တယ်။ ဆီး မသွားနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။
• ပြန်ဖြစ်နေသူတွေကို Antiviral ဆေးပေးတာ ထိရောက်တယ်။ စဖြစ်သူကို Antiviral ဆေးပေးတာ ပေးရင်လဲ မြန်မြန်သက်သာတယ်။ HIV ရှိနေသူတွေကို Antiviral ဆေးပေးတာ မသိသာဘူး။
ရေယုံဆိုတာ Virus Infections ဗိုင်းရပ်စ် ကနေဖြစ်တယ်။ ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ နေရာ အတော်များများမှာဖြစ်တယ်။ ပါးစပ်၊ နုပ်ခမ်း၊ အရေပြား၊ မျက်စိ၊ လိင်လမ်းကြောင်းတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ Cold sores လို့လဲ ခေါ်တယ်။
(၁) HSV-1 ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ Herpes labialis ပါးစပ်၊ နုပ်ခမ်း၊ Herpes simplex အရေပြားနဲ့ Herpes keratitis မျက်ကြည်လွှာတွေမှာ ဖြစ်စေတယ်။
(၂) HSV-2 အမျိုးအစားဟာ genital herpes လိင်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလို အတိအကျတော့ ကံသေကမ္မ ပြောမရဘူး။ Blisters အနာပျောက်ပေမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က Nerve cells (Ganglia) အာရုံကြောထဲမှာ ကျန်နေသေးမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြန်ပြန်ဖြစ်စေတယ်။ အရေပြားနဲ့ အရေပြားနုလွှာထဲမှာလဲ ပိုးကကျန်နေနိုင်တယ်။ အကြောင်းတခုခုကြောင့် ကိုယ်ပူချိန်၊ ရာသီလာချိန်၊ စိတ်ဖိအားများချိန်၊ ကိုယ်ခံအား ကျနေချိန်တွေမှာ ရောဂါပြန်ပေါ်တတ်တယ်။
– Oral Infection ပါးစပ်မှာဖြစ်တာကို ဆေးစာနဲ့ Herpetic gingivostomatitis ခေါ်တယ်။
– Genital Infection လိင်လမ်းမှာဖြစ်တာ ပိုဆိုးနိုင်တယ်။ တချို့မှာ သိပ်မခံစားရဘူး။
– ဗက်တီးရီးယားပါ ထပ်ဆင့်ဝင်နိုင်တယ် အနံ့ဆိုးတဲ့အရည် ထွက်မယ်။
– ကိုယ်ခံအား နည်းနေသူတွေမှာ ဖြစ်ရင် အနာက ပိုပိုကြီးလာမယ်။ ပျောက်ဘို့ ကြာတယ်။ ကိုယ်ထဲအထိ ရောဂါရောက်နိုင်တယ်။ အစာမြိုပြွန် နဲ့ အဆုပ်၊ အူမကြီးအထိရောက်နိုင်တယ်။
– HSV-1 ပိုးကနေ Cornea မျက်ကြည်လွှာမှာဖြစ်ရင် မျက်စိနာမယ်။ Herpes simplex keratitis ခေါ်တယ်။ အမြင်ထိခိုက်စေမယ်။ အလင်းရောင်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူး။ ဆေးမကုဘဲထားရင် အပြင်တိမ်ဖြစ်ပြီး Corneal transplantation မျက်ကြည်လွှာလဲတာ လုပ်ရမယ်။
– HSV ပိုးကြောင့် ဦးနှောက်မှာဖြစ်ရင် Herpes encephalitis ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ပူမယ်၊ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်မယ်၊ တက်မယ်၊ သေနိုင်တယ်။
– ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းကနေ သူ့ကလေးကို ကူးစေနိုင်တယ်။ Neonatal herpes ဖြစ်စေတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းအနားမှာ ရေယုံဖြစ်နေရင် မွေးဖွါးနေတုံးမှာ ကူးစေတာဖြစ်တယ်။ မမွေးခင်ကလေးဆီကူးတယ်ဆိုတာ အလွန်ရှားတယ်။
– Antiviral Drugs ဆေးဆိုတာမရှိသေးပါ။ ပြန်ဖြစ်နေသူတွေကိုတော့ Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir စားဆေးတွေက သက်သာရာ ရစေနိုင်တယ်။ စောစောဆေးပေးတာ ပိုသက်သာစေတယ်။
– Docosanol ဆေးပါတဲ့ Creams လိမ်းဆေးကို တနေ့ ၅ ခါလိမ်းတာလဲ သက်သာစေမယ်။
– Topical anesthetics (Tetracaine cream or Benzocaine ointment) နာတာသက်သာစေတဲ ထုံဆေးလဲ သုံးနိုင်တယ်။ ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အနာ နာရင် Lidocaine သုံးနိုင်တယ်။ မျိုမချရဘူး။
– Pain relievers နာတာသက်သာစေတဲ့ စားဆေးတွေလဲ သုံးနိုင်တယ်။
နောက်ထပ် မဖြစ်အောင် ရေယုံဖြစ်စေတယ်လို့ ထင်တဲ့ အလေ့အထ နဲ့ အစားအသောက် ရှောင်သင့်တယ်။ နှုပ်ခမ်း အနာရှိသူနဲ့ ပါးစပ်သုံး နမ်းတာ မလုပ်ရ၊ လိင်လမ်းဖြစ်သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ ရှောင်ပါ။ လက်ပွန်းတတည်း မနေပါနဲ့။
• Acyclovir ဆေးကနေ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမသေစေပါ။ ဒါပေမဲ့တိုးပွါးလာမှာကိုတားပေးပါမယ်။ ရောဂါလက္ခဏာကိုလဲ သက်သာစေမယ်။ Genital herpes လိင်လမ်းရေယုံ၊ Cold sores နှုပ်ခမ်းရေယုံ၊ Shingles ရှင်ဂဲလ် နဲ့ Chicken pox ရေကျောက်ရောဂါတွေကို ပေးတယ်။
• ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ Common cold အအေးမိတာနဲ့ Flu တုပ်ကွေးကိုတော့ မပေးပါ။
• Genital herpes လိင်လမ်းရေယုံဖြစ်နေချိန်မှာ အတူမနေပါနဲ့။ (ကွန်ဒွမ်) သုံးလို့တော့ရပါတယ်။
1. ဆရာ ကျွန်တော့အဖေ လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်နေတယ်။ ဗိုက်လည်းပိုက်ထည့်ထားတယ်။ အသက်က ၈၇နစ်ပါ။ ဓါတ်ကင်သင့် မကင်သင့် အကြံပေးပါ။ မျော်လင့်ချက် ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ သိပါရစေ ဆရာ။ ကျေးဇူးပါ။
2. သမီးရဲ့ အဖေ (၅၆ နှစ်) မှာ အသံဝင်နေသည်မှာ ၈ လ ၉လ ကြာနေပါသည်။ ယခုလ ၈-၃-၁၂ ရက်တွင် နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး အသံပြွန်နေရာသို့ မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ပါသည်။ အသံပြွန် ၂ ချောင်းတွင် ၁ ချောင်းမှာ အဖုလေးများ ဖြစ်နေပါသည်ဟုပြောပြီး ဖြတ်ပစ်လျှင် ပြန်ပြီး အသံထွက်နိုင်ပါသည်ဟု ပြောပါသည်။ ၁ဝ-၃- ၁၂ ခွဲစိတ်ပြီး အသားစယူခဲ့ပါသည်။ တတ်နိုင်သလောက် အဖုလေးများကိုလည်း ခွဲစိတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ပြောပါသည်။ အသားစအဖြေမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်နေသည်ဟုပြောပြီး ခွဲစိတ်ခြင်း သို့ ဓါတ်ကင်လျှင် ၉၅ % ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဟု ပြောပါသည်။ ၄င်းနောက် ဓါတ်ရောင်ခြည် ပါရဂူထံသို့ ညွန်ပါသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာနတွင် ၁၆-၃-၁၂ တွင်ပြသပြီး (့) တွင် ဓါတ်ကင်နိုင်ရန် စာရင်ေးပးထားရန်နှင့် ပေးသည့် ရက်ဝေးပါက ဆေးသွင်းထားမည်ဟုပြောပါသည်။ ဓါတ်ကင်ရန် ပေးသည့် နေ့စွဲမှာ မေလ ၁၇ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ကင်ခြင်းနှင့် ဆေးသွင်းခြင်း သဘောတရားများကို သိရှိလိုပါသည်။ အိမ်နားပတ်ဝန်းကျင်မှ အန်တီတယောက်မှာ နှာခေါင်းတွင် စပျစ်သီးသွေးခိုင်ဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်ပြီးမှ ကင်ဆာ တွေ့ရှိသောကြောင့် ဓါတ်ကင်ထားပြီးသူ ဖြစ်ပါသည်။ သိရှိပြီး တပတ်ကြာလောက်တွင် ဓါတ်ကင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူမမှာသွေးသွင်းခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ခဲ့ရပါ။ ဆေးသွင်းခြင်းမှာ တော်တော်လေး ခံစားရမှုများရှိသည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။ အဖေ့အတွက် စိတ်ပူမိသောကြောင့် ဆေးသွင်းခြင်း ဓါတ်ကင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ခံစားရမှုများ ဆောင်ရင်ရှောင်ရန်များကို သိရှိလိုပါသည်ရှင့်။
အသံအိုးက ၂ လက္မလောက်ကျယ်တယ်။ Vocal cords ခေါ်တဲ့ အသံဖြစ်စေတဲ့ အရွတ်အချောင်း ၂ ခုရှိတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာသာ သိသာတဲ့ Adam’s apple (အဒမ်) ရဲ့ ပန်းသီးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အရိုးနုအင်္ဂါက သူ့ရှေ့မှာနေတယ်။ Larynx ကို Supraglottis အပေါ်ပိုင်း၊ Vocal cords ရှိနေတဲ့ Glottis အလည်ပိုင်း နဲ့ Subglottis အောက်ပိုင်း ခွဲခြား လေ့လာတယ်။ စကားပြောရင်၊ မျိုချရင်၊ အသက်ရှူရင် Larynx ကို အဖွင့်-အပိတ်လုပ်တေယ်။ စကားပြောချိန်မှာ Vocal cords တွေက တင်းလာပြီး တခုနဲ့တခု နီးကပ်လာတယ်။ အဆုပ်ထဲကလေကနေ တုန်ခါမှု ဖြစ်စေတယ်။ အသံထွက်လာမယ်။ လျှာ၊ နှုတ်ခမ်း နဲ့ သွားတွေကြောင့် စကားပြောတာ ဖြစ်စေတယ်။
Libido ဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ကို ခေါ်တယ်။ လိင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာ ရှုတ်ထွေးတယ်။ နူးညံ့တယ်၊ စိတ်လှုတ်ရှားမှု၊ စိတ်အခြေအနေ၊ ရုပ်၊ ကိုးကွယ်-သက်ဝင်-ယုံကြည်မှု စတာတွေဟာ မျှတ-မှန်ကန်-ကောင်းမွန်နေဘို့ လိုတယ်။ ဖို-မ ဆက်ဆံရေးမှာ လိင်စိတ်ရှိနေတာ အလွန်အရေးပါတယ်။ လူတယောက်ထဲမှာကို အချိန်တခုနဲ့တခု၊ အခြေအနေတခုနဲ့တခု၊ အသက်အပိုင်းအခြားတခုနဲ့တခု မတူကြဘူး။
လိင်စိတ်ရှိနေတာနဲ့ တကယ်တန်း ထိတွေ-ဆက်ဆံတာ ထပ်တူကြချင်မှ ကြမယ်။ ဆိုပါစို့ လိင်စိတ်က ပုံမှန်နေပေမဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး။ အဖေါ်မဲ့တာတွေကြောင့် လက်တွေ့ ရှိမှာမဟုတ်ပါ။ တခါတလေ စိတ်မပါလဲ လက်တွေ့ ဖြစ်တာလဲ ရှိမယ်။ လိင်ဆေးပညာမှာ နာမည်ရထားတဲ့ ပညာရှင် Sigmund Freud ကပြောခဲ့တယ်၊ အတွင်းစွမ်းအား ပါဘဲတဲ့။ Carl Jung က ပြောတာကတော့ ထမင်းစာချင်စိတ် ရှိနေတာ၊ တကယ်စားတာနဲ့ သဘောချင်း တူတယ်တဲ့။
လိင်စိတ် ဘယ်လောက်ဆိုရင် (နော်မယ်လ်) လဲ သတ်မှတ်ဘို့ ခက်တယ်။ တချို့မှာ နေ့တိုင်း လိင်စိတ် ဖြစ်မယ်။ တချို့ကြ တလတခါ၊ တနှစ်တခါ။ တချို့ ကုန်ခန်းသွားပြီ။ ကျား နဲ့ မ ယှဉ်ရင် အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်စိတ်နည်းတာ ပိုဖြစ်ကြတယ်။ American Medical Association က ခန့်မှန်းတာ အမျိုးသမီး သန်းပေါင်းများစွာမှာ ခံစားနေကြရမယ်တဲ့။ Erectile dysfunction ဆိုတဲ့ လိင်အင်္ဂါသန်မာမှု အားနည်းတာကြ ယောက်ျားတွေမှာ သိပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါက လိင်စိတ် မမှန်တာ-နည်းတာ မဟုတ်ပါ။
အိမ်ထောက်ကျပြီးနေသူ တယောက်နဲ့ ဇာတ်ရှုတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ Infidelity, Philandery, Adultery, Affair ဖေါက်ပြန်မှု ဖြစ်တာတွေ ကြတော့ လိင်ဆန္ဒ မပြည့်ဝလို့ ဖြစ်တာရှိသလို ဖေါက်ပြားချင်စိတ် အလေ့အထကြောင့်လဲ ဖြစ်ကြတယ်။ တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီအားနည်းချက်ကို သက်သေပြနိုင်ရင် လင်မယား ကွာရှင်းလို့ ရတယ်။
စိတ်ပိုင်း သက်ရောက်မှုတွေထဲမှာ လူမြင်သူမြင် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိတာ၊ ရင်းနှီးမှုနည်းလို့ လက်ခံချင်စိတ် မရှိတာ၊ အားအင်ကုန်ပြီး ရုပ်ပိုင်း အားနည်းနေတာ၊ Distraction တခြားနေရာကို စိတ်ပြောင်းသွားတာ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ ပါဝင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု ဆိုတာ အသံ-အလင်း လွန်ကဲနေတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး အရင်က လိင်ပိုင်း စော်ကားမှု ခံခဲ့ရဘူးတာ၊ ပြစ်ပယ်ခံရမှု ကြုံရဘူးတာ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အထင်သေးစိတ် ရှိနေတာ၊ စိုးရိမ်စိတ် ကဲတာတွေ ပါတယ်။ တချို့မှာ ကိုယ်ဝန် တားဆေးကို စိတ်ထဲ အလိုမကျနေတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ စိတ်ဖိအား လျှော့စေနည်း သင်ယူ လေ့ကျင့်သူတွေမှာ တိုးတက်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိဘို့လိုတယ်။ စိတ်ဖိအား များနေရင် မကောင်းဘူး။ ကိုယ့်ရုပ်ရည်ကို ကိုယ်က အားမရ ဖြစ်နေတာ အဆိုးဆုံးဘဲ။ ဥပမာ ငါသိပ်ဝနေတာဘဲ၊ သိပ်ပိန်လွန်းတယ်။ ဒီလို အမျိုးသမီးမျိုးက အလင်းရောင် လင်းတာကို ရှောင်မယ်၊ အဝတ်အစား ချွတ်ဘို့ ဝန်လေးမယ်။ ဒါမျိုးကို အားပေးဘို့ နှစ်သိပ်ဘို့ အချိန်နဲ့ နည်းနာလိုတယ်။ သူ့ရဲ့ တခြား လှပတာမျိုး ရှာပြီး အားပေးသင့်တယ်။ ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ သဘောကောင်းတယ်၊ အိမ်မှုကိစ္စ စိတ်ချရတယ် စသဖြင့်။ စိတ်ဖိအား နဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုလဲ ပြုပြင်ရမယ်။
• Latent homosexuality ဖိုစိတ်-မစိတ် ပုံမှန် မဟုတ်သူတွေမှာလဲ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ ဆက်ဆံဘို့ စိတ်နည်းတတ်တယ်။
• Hypothyroidism လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်း နည်းတာ၊ Testosterone ကျားဟော်မုန်း နည်းတာ၊ Flutamide ဆေးသောက်နေတာ၊ Hyperprolactinaemia ဟော်မုန်းနည်းရောဂါ၊ Cancer ကင်ဆာ၊ Diabetes ဆီးချို၊ Depression စိတ်ကျရောဂါ၊ Anemia သွေးအား နည်းနေတာ၊ Smoking ဆေးလိပ်၊ Alcohol abuse အရက်၊ Drug abuse မူးယစ်ဆေးဝါး၊
• Lifestyle factors တဖက်သားရဲ့ ရုပ်ရည်ကို Attractiveness နှစ်သက် စွဲလမ်းမှုရှိတာ-မရှိတာ။ ကိုယ်ခန္ဓာ သေးလွန်း-ကြီးလွန်းတာ၊ အရပ် ရှည်လွန်းသူနဲ့ ပုလွန်းသူလို ကွာခြားတာ၊ အသက် သိပ်ကွာတာ၊
• Inborn lack of sexual desire မွေးကတည်းက စိတ်နည်းနေတာ၊
• Post-SSRI sexual dysfunction (PSSD) ဆိုတာမျိုး ကတော့ တသက်လုံး လိင်စိတ်နည်းတာ ခံစားနေရမယ်။
Testosterone (တင်စတိုစတီရုမ်း) ဟော်မုန်းဟာ လူတွေရဲ့ လိင်စိတ်မှာ အလွန်တရာ အရေးပါတယ်။ သုတေသန တခုအရ Estrogen နဲ့ Progesterone ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ ကိုယ်ဝန် တားဆေးကြောင့် Testosterone အပါအဝင် ဟော်မုန်းတွေကို Binding တွဲဖက်စေတဲ့ (SHBG) များလာရာကနေ လိင်စိတ်နည်းစေတာ သိလာရတယ်။ ဆေးဖြတ်လိုက်တာတောင် တော်တော်နဲ့ ရင်းစားမရဘူး။
နွားနို့ သောက်လို့၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်လို့ ဆိုတာတွေကနေ စိတ်ပိုစေတယ်လို့ ယူဆသူတွေ ရှိတယ်။ Aphrodisiacs အစားအသောက်တွေကနေလဲ လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။ (စာတပုဒ် ရေးတားပါတယ်။)
• Antidepressants စိတ်မကျဆေးတွေကနေ လိင်စိတ်ကဲစေနိုင်တယ်။ Prozac ဆေးမျိုးက နည်းစေနိုင်တယ်။ ဒီဆေးမျိုးတွေ မတူကြဘူး။ ရွေးသုံးနိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့် လိင်စိတ် များစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ Orgasm လိင်စိတ် ပြည့်ဝသွားဘို့ နှေးစေမယ်။ တချို့ မပြီးဘူး။
• Blood pressure drugs သွေးတိုး ကျဆေးတွေက လိင်စိတ် နည်းစေတတ်တယ်။
• Sedatives စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေ၊ Xanex, Diazepam နဲ့ Valium တွေကနေ လိင်စိတ် နည်းစေနိုင်တယ်။ စိတ်လာတာ နှေးနိုင်တယ်။ တချို့မှာ Orgasm မရတတ်ဘူး။ “Sex goddess လိင်-နတ်သမီး မဟုတ်ဘဲ Lobotomized zombie လိင်စိတ်မဲ့-ဖုတ်ကောင်” လို့ တင်စားကြတယ်။
• Antihistamines (အင်တီ-ဟစ်စတမင်း) လိုဆေးတွေကနေ Lubrication (ဗဂျိုင်းနား) စိုစွတ်မှု နည်းစေနိုင်တယ်။
• Antipsychotic စိတ်ရောဂါဆေး၊ Anti-seizure အတက်သက်သာဆေး၊ Anti-cancer ကင်ဆာဆေး၊ NSAID အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးတွေကနေ လိင်စိတ်နည်းစေနိုင်တယ်။
• Ecstasy ခေါ်တဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ လူငယ်သုံး၊ ကလပ်တွေမှာ သုံးတဲ့ဆေးမျိုးတွေကနေ လိင်စိတ်ကို ကြွစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးသုံးပြီးတော့ Serotonin နည်းတာ ဖြစ်တာလို့ ရုပ်ပိုင်း အလုပ်တွေ ကျစေ-နှေးစေမယ်။ တာရှည်သုံးတာ မကောင်းဘူး။
• Speed ဒါမှမဟုတ် Crystal meth ခေါ်တဲ့ Amphetamines ရာဘဆေးက ယောက်ျားရော၊ မိန်းမပါ သုံးစွဲရင် Sexual Dysfunction လိင်ပိုင်းအလုပ် မမှန်မကန် ဖြစ်စေမယ်။
• Opiates ဘိန်းအုပ်စုထဲက Seroin, Cocaine တွေကနေ Orgasm မရစေနိုင်သလို Sexual desire လိင်စိတ် နည်းစေမယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ Erection လိင်အင်္ဂါ သန်မာမှု မရတာ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ မိန်းမတွေမှာ စိုစွပ်မှု နည်းစေနိုင်တယ်။ Heroin သုံးရင် နှေးကွေး နေတတ်တယ်။ Cocaine က ယုံကြည်စိတ် ပိုစေနိုင်တယ်။ ခံစားမှု ကဲစေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြုံပြောရရင် Slack aphrodisiac လိင်စိတ် နည်းနိုင်တယ်။
• Adrenal glands ကျောက်ကပ် အထပ်မှာရှိတဲ့ (အဒရီနယ်လ်-ဂလင်း) ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ရင် သူကနေ ထုတ်ပေးမဲ့ Testosterone နည်းမယ်။ စိတ်လဲ နည်းမယ်။
• Hysterectomy သားအိမ် ထုတ်ထားသူတွေကို ဆန်းစစ်မှု လုပ်တော့ ထက်ဝက်မှာ လိင်စိတ်ကဲတယ်။ ၂၁% မှာ နည်းတယ်။
Menopause သွေးဆုံးရင် လိင်စိတ်နည်းတယ်လိုတာ အများက လက်ခံကြပေမဲ့ မဟုတ်ဘူး ပြန်ငြင်းသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ သေခြာတာက Estrogen နည်းလာတာမို့ Sex စိတ်နည်းမယ်၊ (ဗဂျိုင်းနား) ခြောက်မယ်။ ဆက်ဆံရင် နာလိမ့်မယ်။ Testosterone လဲ နည်းတာမို့ စိတ်နည်းနိုင်တယ်။
မိန်းမတွေမှာ ကလေးဖွါးပြီးစ စိတ်နည်းတတ်သူ များတယ်။ မွေးလမ်း၊ မျိုးပွါးလမ်းမှာ ရောဂါ တခုခုရှိနေသူတွေမှာလဲ နည်းတယ်။ ရောဂါကြီးတခုခု ခံစားနေရသူတွေမှာလဲ နည်းတတ်တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံထားရသူတွေလဲ ပါတယ်။ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးများ လိင်ကိစ္စမှာလဲ ကောင်းသလို ရာသီလာချိန် ဖြစ်တတ်တာတွေလဲ သက်သာတယ်။ လှုတ်ရှားမှု လွန်ကဲရင်တော့ ပြောင်းပြန် အကျိုး ဖြစ်စေတာကို သတိထားရမယ်။
လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ ရာသီပေါ်တာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ မျိုးဥ မထွက်ခင် ရက်တွေမှာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှု အကဲဆုံး ဖြစ်တယ်။ လလည်ရက် မတိုင်ခင် ရက်တွေကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါက Testosterone အနိမ့်-အမြင့်နဲ့ဆိုင်တယ်။ Testosterone က ၂၄ ရက်မြောက်နေ့ကစပြီး တက်တက် လာတယ်။ မျိုးဥထွက်မဲ့ ၁၄ ရက်အထိ ဖြစ်တယ်။ ဒီရက်တွေမှာ လိင်စိတ်တွေ အဆက်မပြတ် ကောင်းနေမယ်။ တချို့ ၁၃ ကို မကြိုက်တာ ဒီနေရာမှားတယ်။ ၁၃ ရက်နေ့ဟာ Testosterone levels အမြင့်ဆုံးနေ့ ဖြစ်တယ်။ မျိုးဥထွက်ပြီးနောက် Progesterone levels တက်လာတယ်။ ဒီရက်တွေ ဆိုရင် Orgasm လိင်ဆန္ဒ-ပြည့်ဝမှု ရတာခက်မယ်။ လတလရဲ့ နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ Testosterone level တန်းနေပြီး၊ သားအိမ် အတွင်းလွှာ ထူလာလို့ စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို နိုးဆော်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ Estrogen levels ကျလာလို့ စိုစွပ်မှု နည်းမယ်။
Depo-Provera ကိုယ်ဝန်တား ၃ လခံထိုးဆေးဆိုတာ Progesterone ဟော်မုန်း အတုတွေ အများကြီးပါတယ်။ ထိုးထားသူဟာ ကိုယ်ဝန် အတုဆောင်နေသလိုမျိုး ဖြစ်စေတယ်။ Estrogen ထွက်မှာကို တားဆီးထားမယ်။ လိင်စိတ် နည်းနိုင်တယ်။ ဗဂျိုင်းနား သွေ့ခြောက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆက်ဆံရင် နာနိုင်တယ်။
Implanon implants ကိုယ်ဝန်တား အချောင်းကလဲ Depo-Provera နဲ့တူတယ်။ Progesterone ထုတ်ပေးနေတာ ၃ နှစ် လောက်ထိ ကြာနိုင်တယ်။ သက်ရောက်မှု မတူကြပါ။ လိင်စိတ် ကဲလွန်သူ ရှိသလို Implant ထည့်ထားတဲ့ မိန်းမတချို့ဟာ တင်စား ပြောရရင် “အသားမဲ-မုဆိုးမ” လို့ ခေါ်တယ်။ အဖေါ်ယောက်ျားကို အစိမ်းစားလိမ့်မယ်တဲ့။
တင်ထားတဲ့စာများ Select Month September 2014 (276)